थाहा पाउनुहोस भोट हाल्दा को को लाइनमा बस्नु पर्दैन (निर्देशिकासहित) २९ बैशाख रेडियो मुगु (गमगढी) । आगामी आइतबार हुने स्थानीय तहको चुनावमा भोट खसाल्न मतदाता उत्साहित भएर बसेका छन् । बिहीबार राति १२ बजेपछि मौन समय सुरु हुने भएपछि प्रचार प्रसारको समय पनि सकिएको छ । आइतबार बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म मतदान हुने भएकाले सबैलाई तोकिएकै समयमा मतदानकेन्द्रमा गएर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ । अहिलेको चुनाव केवल उम्मेद्वारलाई जिताउने मात्रै नभइ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ लैजानले अभियान भएकाले मदतानमा नछुट्न आयोगले आग्रह गरेको छ । मतदानमा अपाङ्गता भएका, असक्त भएका, बृद्धबृद्धा, गर्भवती र किरिया बसेकाहरु लाइन बस्न नपर्ने र उनिहरुलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर मतदान गर्न दिन आयोगले मतदान अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसै विषयमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्य प्रसाद शर्मासँग उज्यालोका अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानी हामीले उज्यालो अनलाईनबाट साभार गरेका छौ ।
कस्ता कस्ता व्यक्तिहरुले चुनावमा भोट हाल्दा लाइनमा बस्नु पर्दैन त ?
मतदान गर्न आउँदाखेरी खासगरी लाइनमा बस्न नसक्ने बृद्धबृद्धाहरु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, गर्भपती महिलाहरु र विरामी भएर लाइनमा बस्न नसक्नेहरु र किरियापुत्रीले लाइनमा नबसीकनै सिधै भोट हाल्न पाउँछन् । यस्ता व्यक्तिलाई लाइनमा बस्नै नपर्नेगरि हामीले मतदान अधिकृतहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेका छौं ।
बृद्धबृद्धा तथा आफै भोट हाल्ने ठाउँसम्म जान नसक्ने र मत दिन पनि नसक्नेहरुका लागि उहाँको एकाघरको परिवारको एकजना सदस्य मतदानस्थलसम्मै पुगेर उहाँलाई सहयोग गर्न सक्छ । यदि एकाघरको व्यक्ति पनि रहेनछ भने मतदान अधिकृतले सहयोग गर्न सक्छ । पहिले पनि यस्तो व्यवस्था त थियो, तर सुरक्षाको दृष्टिकोण भन्दै मतदान अधिकृतले लाइनमै लगाएको र अशक्तहरुलाई सहयोग गर्न एकाघरका व्यक्ती पनि नपठाएको गुनासो आएको थियो । यसपटक पहिलेभन्दा फरक थप स्पष्ट निर्देशन केही छ कि ?
यसपटक हामीले स्पष्ट निर्देशन पनि दिएका छौं अनि अपाङ्गता भएका, अशक्त, दृष्टीविहन,गर्भवती, गम्भिर विरामी, किरियापुत्री लगायतलाई लाइनमा बस्न नपर्ने कानुनी व्यावस्था नै छ । बृद्धबृद्धा छ भने उसलाई पालनतालन गर्ने उसकै सन्तान हुन्छ, र उसले मतदान गरेर घरै पु¥याउनुपर्छ । बृद्धबृद्धा र असाह्यका पारिवारिक सदस्यबाहेक विश्वासिलो अरु कोही हुन्न । त्यसैले उनिहरुलाई मतदान गर्न सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।
दृष्टिविहिनहरुको हकमा पनि त्यै हो ?
दृष्टिविहिनको हकमा पनि परिवारको सदस्यले उनिहरुको आग्रहवमोजिमको व्यक्तीलाई मतदान अधिकृतले मतदानस्थलभित्रै जान दिएर सहयोग गर्न दिनुपर्छ । दृष्टिविहिनहरुले चुनाव चिन्ह पनि पत्ता लगाउन नसक्ने भएकाले उनिहरुलाई लालनपानल गर्ने व्यक्ती लाइनमा नबसी दृष्टिविहिनकै आग्रह अनुसारको चिन्हमा छाप लगाइदिनुपर्छ ,
तपाइँले भनेका व्यक्तीहरुले सिधै मतदान केन्द्रमा गएर लाइन नबसी मतदानस्थलतर्फ जान सक्छन कि पुर्वजानकारी केहि दिनुपर्छ ?
जानकारी त तपाइँहरुजस्तो सञ्चारमाध्यमले दिनुपर्छ । उहाँहरुलाई आफ्नो हक अधिकारको बारेमा उहाँहरुलाई सबैभन्दा प्रभावकारी सूचना उज्यालो जस्ता सञ्चारमाध्यमले दिन सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पुर्वसूचना दिइरहन पर्दैन, मतदान गर्ने दिन मतदान स्थलमा गएपछि त्यहाँका स्वयंसेवले नै उहाँहरुलाई सहयोग गर्छन । जस्तो कोही ह्वीलचेयरमा कोही आउनुभयो भने उहाँलाई स्वयंसेवकले नै सहयोग गर्छन ।त्यस्ता सुविधा दिन भनेर हामीले मतदान अधिकृतलाई निर्देशन नै दिइसकेका छौं । अपाङ्गता भएका, गर्भवती, किरियापुत्री लगायतले यो पटकको चुनावमा लाइनमा नबसी ढुक्क भएर भोट हाल्न पाउने भए, कसैको रोकटोक हुने भएन हैन त ?
हो, उहाँहरु लाइनमा बस्नुपर्दैन, ढुक्क भएर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । हाम्रो स्थानिय तह निर्वाचन निर्देशिका अनुसार पनि उहाँलाई सहज छ । यस्तो छ निर्देशिकामा
८१) मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न अनुमति : (१) मतदान अधिकृतले देहायका व्यक्तिलाई मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ –
(ङ) महिला मतदाताको साथमा रहेको बढीमा पाँच वर्षको बालक,
(च) दृष्टिविहीन वा शारीरिक रुपले अशक्त मतदाताको सहयोगको लागि साथमा आएको एकाघरको परिवारको सदस्य।
घट (२) मतदान अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने अनुमति दिँदा मतदान कार्यको निमित्त अति आवश्यक पर्ने हो भन्ने कुरा यकिन गरेर मात्र अनुमति प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
(३) निर्वाचन आयोग वा निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न अनुमति दिएको व्यक्तिलाई नियमावलीको नियम ३७ बमोजिमको अनुमति पत्र दिनु पर्नेछ ।
पुरै निर्देशिका यहाँ हेर्नुहोस